Abona Barhwebi baBarhwebi boLungiso lweeNkcazo ukwenza iXabiso liphezulu! NgoJanuwari 2022
Funda ngesiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2021 kuRhwebo lwe-Index!
Urhwebo lwesalathiso likuvumela ukuba utyale imali kwiimarike ezibanzi zesitokhwe ngorhwebo olunye. Umbono ogqithileyo kukuba isalathiso siya kulandelela iqela leenkampani ezithengisa kwiimarike ezithile zestokhwe. Umzekelo, i-FTSE 100 ineenkampani ezili-100 ezinkulu ezirhweba kwiLondon Stock Exchange.
Ngokwesiqhelo, kuya kufuneka ubeke ii-odolo ezili-100 ezizodwa, ezingayi kuba lixesha elininzi kuphela, kodwa zibize kakhulu. Endaweni yoko, ngokukhetha isalathiso, unokwahluka ngokulula. Ngapha koko, uya kuba nelungelo lokufumana izabelo zenkampani kunye nokuba bahlawulwa nini.
Unomdla wokufumanisa ukuba ii-indexes ze-stock market zisebenza njani? Ukuba kunjalo, singacebisa ukuba sifunde Isikhokelo sethu sokuFunda soRhwebo esiyi-2 soRhwebo ngo-2021. Sigubungela yonke into oyifunayo ukuze uqale ukurhweba ngesalathiso namhlanje!
Qaphela: Kuyenzeka ukuba isalathiso esifutshane sisebenzise iiCFD. Oku kufanelekile ukuba ucinga ukuba ukudodobala kwemali kuyenziwa kwaye ucinga ukuba ixabiso leemarike ezibanzi zibangelwa kukuhla.
Kwindlela yayo esisiseko, isalathiso sisixhobo semali esivumela ukuba utyalomali kwiqela leenkampani. Kwiimeko ezininzi, isalathiso siya kulandelela ukuhamba kwamaxabiso esitokhwe esidweliswe kutshintshiselwano oluthile. Umzekelo ophambili woku yi-NASDAQ 100, elandelela iinkampani ezinkulu ezili-100 ezidweliswe kolu tshintshiselwano. Njengomtyali mali, oku kukuvumela ukuba ufumane ukubonwa ziifemu ezili-100 ngaphandle kokuba ufuna ukubeka amashishini ali-100.
Ukuba bekunjalo, ngaba unokucinga ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuthenga umntu ngamnye kwisitokhwe kwiinkampani ezili-100? Ayizukubethwa nje kuphela ziimfumba zeerhafu zomrhwebi, kodwa kuya kufuneka uthenge rhoqo kwaye uthengise izitokhwe njengoko isalathiso sidibanisa iinkampani ezintsha. Xa usenza urhwebo lwesalathiso sesitokhwe, usazakuxhamla kwiintlawulo zesahlulo- ukuba nje utyala imali kwi ETF. Ukuba uthatha isigqibo sokurhweba isalathiso nge-CFDs, ngekhe.
Uncedo olongezelelekileyo lokutyala imali kwi-stock market index kukuba uza kwenza iphothifoliyo yeenkampani ezahlukeneyo. Umzekelo, i-S & P 500- elandelela iinkampani ezingama-500 ezinkulu e-US, ifumene umyinge wembuyekezo yonyaka nge-9.8% ukusukela oko yaqalwa ngo-1928. Oku kungenxa yokuba utyala imali kuqoqosho olubanzi lwase-US, ngokuchaseneyo nenkxaso yenkampani nganye. Ngokuqinisekileyo, i-US iye yaya kudodobala oluninzi kule minyaka ilishumi idlulileyo, kodwa uqoqosho belusoloko lubuyela umva.
Ngokubalulekileyo, nokuba inkampani ekwisitokhwe semarike yemasheya iye yonakala, oku ngekhe kusoloko kugqityiwe-ngakumbi kwimeko ye-S & P 500. Ukuba unomdla kurhwebo lwesalathiso ngexesha elifutshane, oku kunokwenzeka ngeCFDs . Oku kuyakuvumela ukuba ufake isicelo kwisalathiso osikhethileyo, kunye nokuzibandakanya kuthengiso olufutshane. Kodwa awuyi kuba nelungelo kuso nasiphi na isahlulo sesitokhwe ukuba ufinyeza isalathiso, njengoko ungenayo iasethi ephantsi.
Iinkonzo kunye neengozi zokuThengiswa kweeNkcazo
Tyala imali kumakhulu eenkampani ngorhwebo olunye
Eyona ndlela ilungileyo yokwahlula utyalomali lwakho
Iimali zesalathiso nge-ETFs zikunika ilungelo lokwahlulahlula
Awuyi kuziva ugcwele ngokupheleleyo ukuba inkampani enye iyahamba
Imali yesalathiso nge-CFDs ikuvumela ukuba ufake isicelo kwaye uhambe ngokufutshane
Gcina ngokulula nge-debit / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet, okanye iakhawunti yebhanki
Gcina imali kwisalathiso kwimizuzu
Ezona Zixhobo ziDumileyo zoRhwebo
Kukho ngokoqobo amakhulu eenkcazo zentengiso yemasheya ezithengiswa kuqoqosho lwehlabathi. Ukukunika umbono wezona zixhobo zidumileyo zorhwebo njenge-2020, jonga uluhlu olungezantsi.
I-S & P 500: Umgangatho kunye namahlwempu 500, okanye ngokulula 'i-S & P 500', sesona salathisi sithengiswayo ehlabathini. Njengoko kuphawuliwe ngaphambili, inezona nkampani zikhulu zidweliswe esidlangalaleni e-US. Oku kubandakanya iifemu ezidweliswe kuzo zombini i-NASDAQ kunye neNew York Stock Exchange. Esi salathisi sisixhobo sokugqibela sokutyala imali kuqoqosho olubanzi lwaseMelika.
UDow Jones: Nokuba ungumtyali mali we-newbie, konke-kodwa-okuqinisekileyo ukuba uvile ngeDow Jones. Into enomdla kukuba, nangona iDow ikwaluphawu olukhulu loqoqosho olubanzi lwaseMelika, inenkampani ezingama-30 kuphela. Oku kubandakanya iifemu ezinkulu ezidweliswe kuzo zombini iindlela ezinkulu zokutshintshiselana kwezitokhwe e-US, kumashishini amaninzi.
I-FTSE 100: I-FTSE 100 yinkcazo yemarike yase-UK elandelela iinkampani ezili-100 ezinkulu ezidweliswe kwiLondon Stock Exchange. Le yeyona ndlela ilungileyo yokufumana ukubonwa kuqoqosho olubanzi lwase-UK.
I-NASDAQ 100: Ukuba ufuna ukugxila kutshintshiselwano lwe-NASDAQ ejolise kubuchwephesha, kunokuba kufanelekile ukujonga i-NASDAQ 100. Njengoko igama lisitsho, oku kulanda iinkampani ezili-100 ezinkulu ezidweliswe kwi-NASDAQ. Isalathiso silawulwa ziifemu zeBig Tech ezinje ngeApple, Microsoft kunye neAmazon.
INikkei 225: I-Nikkei 225 ilandelela iinkampani ezingama-225 ezinkulu ezidweliswe kwiTokyo Stock Exchange. Oku kubandakanya ukuthandwa kweToyota, Japan Cuba, Honda, Nikon, kunye neYamaha.
URussell 2000: Ngokungafaniyo ne-S & P 500 kunye noDow Jones, iRussell 2000 ilanda iinkampani ezincinci ukuya kweziphakathi zaseMelika. Ngama-2,000 amafemu awodwa enza isalathiso, esi sesinye isixhobo esihle sokwahluka kuqoqosho olubanzi lwaseMelika.
Zisebenza njani ii-Index zeNtengiso yeStock?
Nangona ukuthengiswa kwesalathiso semarike yemasheya kufanelekile kubatyali mali bazo zonke iimilo kunye nobukhulu, kubalulekile ukuqonda ukuba inkqubo isebenza njani.
✔ Isalathiso siya kugxila ekuKhangelwa
Okokuqala nokuphambili, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba akukho salathiso sinye kwimarike nganye yesitokhwe. Ngamanye amagama, ukuba ufuna ukutyala imali kwi-FTSE 100, ngekhe utyale imali kwi-FTSE 100 ngentetho nganye. Endaweni yokuba uya kuba utyala imali ngesalathiso Umniki. Kukho amakhulu ababoneleli besalathiso abasebenza kwimarike, nganye inezinto ezilungileyo nezingalunganga.
Ngokubalulekileyo, indima yomnikezeli wesalathiso kukulandela ixabiso lehlabathi lokwenyani leenkampani ezenza isalathiso. Umzekelo, masithi umboneleli uyakuvumela ukuba utyale imali kwiDow Jones. Ukuze uququzelele oku ngendlela efana nale, umboneleli kuya kufuneka athenge ngokwasemzimbeni izabelo kuzo zonke iinkampani ezingama-30 ezenza iDow. Ngokwenza njalo, isalathiso siza kubonisa ixabiso lehlabathi lokwenyani leenkampani ezinikwe umsebenzi wokulandela umkhondo.
✔ Izalathiso zixabisiwe kumaNqaku
Xa uthenga izabelo kwinkampani enye, wenza njalo ngexabiso elithile lezabelo. Umzekelo, ukuba uthenge isabelo kwi-Apple nge-250 yeedola kwisitokhwe ngasinye, kwaye emva koko uyithengise nge-300 yeedola, oku kuya kubonisa inzuzo eyi- $ 50. Oku kulula, njengoko inzuzo kunye nelahleko yakho inyanzeliswa lixabiso lokwenyani lehlabathi lesitokhwe ekuthethwa ngaso.
Nangona kunjalo, ii-indexes zixabisiwe ngokwamanqaku 'kwaye' hayi ezemali ezifana nedola yaseMelika okanye iphawundi. Umzekelo ophambili woku yi-S & P 500, ethi ngexa lokubhalwa ibe namaxabiso angama-2,863.
Isizathu soku kukuba isalathiso sineenkampani ezinamaxabiso esitokhwe ahlukeneyo kunye neemali zentengiso, ke ngekhe kube sengqiqweni ukuxabisa izinto ngokwesiqhelo. Ngokubalulekileyo, njengoko isalathiso sikhula ngamanqaku, oku kuthetha ukuba ixabiso leenkampani ezisisiseko liyenyuka ngokuhlangeneyo.
✔ IiNgxowa-mali ze-Index zidweliswe kwiiNtengiso zeStock
Nangona sigubungela inkqubo yotyalo-mali ukuya esiphelweni ngokweenkcukacha kamva, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isalathiso semali sidweliswe kuthengiso lwesitokhwe. Umzekelo, masithi ubufuna ukutyala imali kwi-FTSE 100. Ukuze wenze oku, unokuthatha isigqibo sokusebenzisa umboneleli onje ngeVanguard. Kule meko, uza kuba utyala imali kwi-'Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing ', edweliswe kwiLondon Stock Exchange.
Nangona besitshilo ngaphambili ukuba ii-indexes zentengiso yexabiso lentengo zixabiso kumaxabiso, oku akunjalo xa utyala imali kunye nomnikezeli othile onjengeVanguard. Emva kwayo yonke loo nto, ingxowa-mali yesalathiso idweliswe kwiLondon Stock Exchange, ke kufuneka ibe nexabiso ngeepawundi neepeni.
Ixabiso lesitokhwe liya kuthi emva koko linyuke liye ezantsi ngokudibana kwi-FTSE 100 index, enexabiso kumaxabiso. Umzekelo, ngexesha lokubhala iVanguard FTSE 100 UCITS ETF yokuHanjiswa kwexabiso lixabisa i- £ 26.25, ngelixa eyona index ye-FTSE 100 yona inexabiso kuma-5,991 amanqaku.
Ngokubalulekileyo, ngelixa i-Vanguard's index fund ibiza amaxabiso nge- £ 26.25, abanye ababoneleli baya kubekwa amaxabiso ngokwahlukileyo, nangona kunjalo, isalathiso ngasinye kufuneka sinyuke sisehla ngendlela efanayo njengoko zonke zilanda isitokhwe esinye!
✔ Iimali zesalathiso 'zinobunzima'
Olunye uphawu ekufuneka wenziwe ngalo xa urhwebo lwesalathiso 'lolokulinganisa'. Ngokucacileyo, iimali zesalathiso zinobunzima, oko kuthetha ukuba izitokhwe ezithile ziya kuba nefuthe elikhulu kwixabiso lesalathiso kunabanye. Umzekelo, inkampani enemali enkulu enkulu yentengiso iya kuhlala ithwala ubunzima obukhulu kunaleyo incinci ngobukhulu.
Masithathe i-NASDAQ 100 njengomzekelo ophambili. Nangona isalathiso siqulethe iinkampani ezinkulu ezili-100, ngaphezulu kwama-32% yenziwe lilungisa Ntathu iinkampani - iMicrosoft, Apple, kunye neAmazon. Ngelixa ezi femu zintathu zenza i-10-11% yesalathiso nganye, ukuthandwa kweFox Corp, Ubuhle be-Ultra, kunye ne-United Airlines zenza ngaphantsi kwe-0.1% yesalathiso!
Isizathu esigqibeleleyo soku kukuba intshukumo yentengiso ngequbuliso yezi stocks zintathu zobuchwephesha kuyo nayiphi na indlela inokuba nefuthe elibonakalayo kwiimarike zesitokhwe ezibanzi, ke kusengqiqweni ukuba ubunzima buhlengahlengiswe ngokufanelekileyo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ayizizo zonke iimali zokurhweba ezisisiseko ezisekela inkqubo yazo yokulinganisa kwiimali zentengiso. Umzekelo, iDow Jones isebenzisa indlela engaqhelekanga egxile kwixabiso lesitokhwe lenkampani. Kananjalo, nangona iCoca Cola inexabiso elikhulu kakhulu kune-3M, eyokugqibela inobunzima obuphezulu njengoko ixabiso lesabelo liphantse liphindwe kane.
✔Iinkampani ezikwi-Index zinokutshintsha
Xa kuziwa kwiinkampani ezenza isalathiso, kuyavakala ukuba oku kuya kutshintsha kwinqanaba elithile ukubonisa iimarike ezibanzi. Umzekelo, njengoko i-FTSE 100 ijonga iinkampani ezinkulu ezili-100 ngokubhekisele kwiimali zentengiso, kuya kuhlala kukho iifemu ezingaphandle kwesalathiso ezixabisa ngaphezulu kunezo zisezantsi kwesalathiso esilinganiselweyo.
Nangona kunjalo, iya kuba yinto enzima yokulungiselela ukongeza rhoqo kunye nokususa iinkampani ngaphakathi kwesalathiso, njengoko ababoneleli bengxowa mali beya kudinga ukuthenga nokuthengisa izitokhwe ngokufanelekileyo. Ngenxa yoko, ii-indexes ezinje nge-FTSE 100 kunye ne-S & P 500 ziya kuthi ziphonononge ukwakheka okungaphantsi kube kanye kwiinyanga ezintathu.
Ngale nto ithethiweyo, nokuba iinkampani ezintsha zongezwa kwisalathiso, oku akukuchaphazeli njengomtyali mali. Ngokuchasene noko, ngekhe uqaphele nokuba utshintsho lwenziwe, njengoko oku kuhoywa ngumboneleli wengxowa-mali.
Isalathiso sokurhweba: ii-ETFs kunye neeCFDs
Ke ngoku uyazi ii-ins kunye nokuphuma kwendlela esebenza ngayo ii-indexes, ngoku kufuneka sijonge indlela elimelwe ngayo utyalomali lwakho. Ngokubalulekileyo, oku kuya kuza ngohlobo lwe-ETF okanye iCFD.
Apha ngezantsi sivavanya indlela ezimbini ezi thelekisa ngayo. Funda icandelo ngalinye ukuze uqiniseke ukuba yeyiphi efanelekileyo kwiimfuno zakho zotyalo-mali.
Ukuba ukhangele ixesha elide, utyalomali oluninzi olwahlulwe kakhulu, ungangcono ukhethe i-ETF (iNgxowa-mali yokuThengiswa okuThengisiweyo). Kwifom yayo esisiseko, i-ETF iya kulawulwa liziko elinye elinemali njengeVanguard okanye iBlackRock.
Umboneleli obuzwayo uya kuthi emva koko athenge isabelo ngasinye kwisalathiso, ngokwenkqubo yokulinganisa. Ngokwenza njalo, ukuhamba kwesabelo ngasinye kuya kujonga isalathiso esifana nokuthanda.
Kwimeko yee-CFDs (Izivumelwano-zoMmahluko), awunayo iarhente engaphantsi. Endaweni yokuba ii-CFDs zenziwe ngabarhwebi. Umbono ogqwesileyo kukuba ii-CFDs ziya kulandelela ixabiso lehlabathi lokwenyani lesalathiso.
Ngapha koko, i-CFD ekuthethwa ngayo iya kuthi ilandelele umboneleli othile we-ETF onje ngeVanguard. Ngokubalulekileyo, oku kuthetha ukuba umboneleli weCFD akazithengi naziphi na izabelo kwiinkampani ezenza isalathiso.
Njengomboneleli weNgxowa-mali ubambe izabelo ezenza isalathiso, baya kuba nelungelo kwizabelo. Kwimeko yengxowa mali yesalathiso esikhulu njenge-FTSE 100 okanye i-S & P 500, oku kuthetha ukuba umboneleli uya kuthi afumane izabelo kwinyanga yonke.
Kungangabinamveliso kwaye kuyabiza ukuba umboneleli athumele phambili kwiintlawulo zesahlulo ezininzi njengoko zifunyenwe, kwaye ke uya kuthi ufumane isabelo sakho rhoqo ngekota.
Ayizukuba njalo ukuba ukhetha i-CFD, kuba akukho zabelo zithengiweyo. Ngenxa yoko, awuyi kubanalo ilungelo lokufumana naziphi na iintlawulo zesahlulo.
Nokuba ukhetha i-ETF okanye i-CFD, ixabiso le Utyalomali lwakho lwesalathiso iyakumiselwa ngokwemali efana needola zaseMelika okanye iponti entle. Kwimeko yeengxowa-mali zesalathiso se-ETF, isixhobo semali siya kudweliswa kwimarike enkulu yesitokhwe.
Umzekelo, isalathiso esidlulileyo se-FTSE 100 yiVanguard idweliswe kwiLondon Stock Exchange. Oku kukuvumela ukuba utyale ngokulula kwi-ETF, kunye nokufumana imali yakho.
Inkqubo yamaxabiso ihlala ifana nee-CFDs, njengoko isixhobo siza kulandelela isalathiso esithile se-ETF esidweliswe esidlangalaleni. Kananjalo, ixabiso le-CFD liya kuthi libonakalise ukuba le-ETF iyalandelela.
Xa utyalomali kwi-index ye-ETF kwimveli yendabuko, uya kuba malunga nokuthengisa kuphela kwimali elinganayo okanye ngaphantsi kwe-akhawunti yakho. Umzekelo, ukuba une- £ 1,000 kwiakhawunti yakho yomrhwebi, ngekhe ukwazi ukuthengisa ngaphezulu koku.
Oku akunjalo xa kuthengiswa ii-CFDs, njengoko unokufaka isicelo. Oku kukuvumela ukuba urhwebe ngemali eninzi kunaleyo unayo kwiakhawunti yakho- ngaphantsi komrhumo omncinci wenzala ohlawuliswa ngumrhwebi.
Ukuba use-UK okanye kwi-European Union, imida ye-ESMA ikuvumela ukuba urhwebe ii-indexes ezinkulu zesitokhwe esine-upto 20: 1. Oku kuthetha ukuba ibhalansi ye- $ 200 inokukuvumela ukuba uthenge okanye uthengise i-CFD kwi-S & P 500 ngexabiso le- $ 4,000.
Ngokufanayo, isalathiso sendabuko se-ETFs sikuvumela ukuba uhambe 'ixesha elide', okuthetha ukuba uqikelela kwisalathiso esinyuka ngexabiso. Nangona kunjalo, urhwebo lwesalathiso ngeCFDs likuvumela ukuba uhambe ngokufutshane. Oku kuthetha ukuba unokwenza ingeniso ukuba ucinga ukuba isalathiso semarike yemasheya siyakuhla ngexabiso.
Imirhumo yokuRhweba ngeZalathiso
Njengokuba kunjalo kuzo zonke izixhobo zemali, kuyakufuneka uhlawule umrhumo kurhwebo lwesalathiso semali. Imodeli ethile yamaxabiso ayizukuxhomekeka kuphela kumthengisi wakho omkhethileyo, kodwa nokuba ukhetha ii-index ze-ETFs okanye ii-CFDs.
Ngale nto ithethwayo, apha ngezantsi sidwelise ezinye zeemali eziphambili oya kuthi uzihlawule xa usenza urhwebo kwi-intanethi.
Nokuba ungathengisa ii-CFDs okanye ii-ETFs, uya kuhlala uhlawula sasaza. Kwabo abangaziyo, lo ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nokuthengisa, kwaye yindlela abathengisi abaqinisekisa ngayo ukuba bahlala besenza imali. Ukunyuka kokunwenwa, kokukhona kukuhlawula ngokungangqalanga. Kananjalo, kuya kufuneka usoloko uhamba nesalathiso sendawo yokuthengisa esasaza ukusasazeka okuqinileyo.
Ikhomishini yokuRhweba ngeZalathiso
Kuya kufuneka uhlawule umrhumo othile xa uthenga okanye uthengisa ingxowa-mali yesalathiso. Kwimeko yesalathiso se-CFDs, oku kuhlala kuyipesenti encinci yemali oyithengisayo. Umzekelo, ukuba ubeka i-odolo yokuthenga kwi-Dow Jones index kwi- £ 500, kwaye umrhwebi ubiza i-0.5%, uya kuthi uhlawule ikhomishini yorhwebo ye- $ 2.50.
Kwimeko ye-ETFs, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini yokuthengisa eguquguqukayo njenge-CFD, okanye umrhumo othe tyaba. Ukuba yeyokugqibela, umrhumo weplati uhlala ngokufanayo nokuba utyala imali kangakanani.
Ukuba iikhomishini zokurhweba zihlawuliswa ngumrhwebi wakho, kuyakufuneka uhlawule xa ungena kwindawo yakho, naxa uyivala.
Umlinganiselo weendleko usebenza kuphela xa uthengisa imali yenkcazo nge-ETF. Le ntlawulo isekwe kwiindleko ezinxulumene nokuqhuba ingxowa-mali yesalathiso se-ETF.
Umzekelo, oku kuyakuquka iindleko ezinxulunyaniswa nokuqhuba iqela labarhwebi, ukuthenga nokuthengisa izabelo ezithile, ukuhambisa izabelo kunye nokulungiswa kweentlawulo. Kwiimeko ezininzi, umlinganiselo weendleko usebenza ngaphantsi kwe-1% ngonyaka.
Uqala njani ukurhweba ngesalathiso namhlanje
Ukuba uyasithanda isandi sentengiso yesalathiso- kwaye ufuna ukuqala ngeakhawunti namhlanje, ngoku siza kukubonisa into ekufuneka uyenzile. Ngokulandela izikhokelo ezichazwe ngezantsi, unokuba nesalathiso sotyalomali ngaphakathi kwemizuzu!
Inyathelo 1: Khetha ukuba uyafuna ukurhweba ii-ETFs okanye ii-CFDs
Izibuko lakho lokuqala lokufowuna kukuthatha isigqibo ngohlobo lwesicwangciso sokurhweba esineenkqubela phambili onqwenela ukusisebenzisa. Umzekelo, ukuba ujonge ukutyala imali kwingxowa-mali yexesha elide- kwaye ufuna ukuxhamla kwiintlawulo zesahlulo esiqhelekileyo, ke ulungele i-ETF.
Ngenye indlela, ukuba ujonge ukuthengisa izalathiso ngexesha elifutshane- kwaye unokhetho lokusebenzisa amandla kunye nokuthengisa okufutshane, ke ulungele i-CFD.
Inyathelo 2: Fumana iSiza esiThengiswayo sokuThengisa indawo
Nje ukuba ufumanise ukuba uyafuna ukukhetha ii-CFDs okanye ii-ETFs, emva koko kuya kufuneka ufumane indawo yokuthengisa isalathiso. Kukho ngamawaka abathengisi abakwi-Intanethi abakunika ukufikelela kwizimali zesalathiso, ke ukwazi ukuba leliphi iqonga lokungena kunye kunokuba ngumceli mngeni.
Ukukunceda apha endleleni, siye sanikezela ngeengcebiso eziluncedo ezantsi ezantsi kwisikhokelo sethu ngendlela yokukhetha indawo yokuthengisa isalathiso. Ukuba unomdla wokuqalisa ukurhweba ngoku, sichaza amaqonga ethu aphezulu ezorhwebo ezantsi kweli phepha.
Inyathelo 3: Vula iAkhawunti
Nje ukuba ufumene indawo yokurhweba yesalathiso oyithandayo, uya kuthi emva koko uvule iakhawunti. Ukuqalisa kwenkqubo, kuya kufuneka unikezele ngolwazi lomntu siqu.
Oku kuya kubandakanya eyakho:
Uya kuthi emva koko ubonelele ngolwazi malunga namava akho orhwebo, ngoko ke umrhwebi uyazi ukuba ingaba awunakuba nakho na ukurhweba kunye nomgangatho.
Emva koko, kuyakufuneka uqinisekise isazisi sakho. Inkqubo ilula, kwaye ifuna nje ukuba ulayishe ikopi yencwadana yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Uninzi lwamaqonga luya kuqinisekisa uxwebhu kwangoko.
Uya kuba urhwebo ngezalathiso ngemali yokwenyani, ke ngoku kuya kufuneka ubeke imali. Uninzi lweendawo zokurhweba zesalathiso zikuvumela ukuba ungeze imali ngedebhithi yemveli / ikhadi letyala okanye iakhawunti yebhanki.
Unokuba nenketho yokusebenzisa i-e-wallet njengePaypal okanye iSkrill. Uninzi lweziza zorhwebo ziya kufaka inani elincinci ledipozithi, oya kuthi uhlangane nalo.
Inyathelo 5: Khetha i-Index yoRhwebo
Kweli nqanaba le inkqubo, Kuya kufuneka ngoku uneakhawunti yorhwebo yesalathiso egcweleyo exhaswa ngemali. Ukuba kunjalo, ngoku kufuneka ufumane isalathiso sokurhweba. Ukuba unengxowa-mali ethile engqondweni, kuya kufuneka ukwazi ukuyikhangela. Ukuba akukhange kubenjalo, khangela isalathiso (esihlala sibhekiswa njengezalathiso) kwiqonga olikhethileyo.
Inyathelo 6: Beka uMyalelo
Ukugqiba inkqubo yotyalo-mali, kuya kufuneka ngoku ubeke iodolo. Indlela echanekileyo iya kuxhomekeka ekubeni ukhethe i-ETF okanye i-CFD.
Ngenisa ngokulula isixa onqwenela ukutyala imali kwi-ETF
Qinisekisa iodolo yokuthenga
Faka isibonda sakho xa sisonke
Ngenisa ixabiso lakho lokungena kwi-odolo yomda (kucetyiswa (, okanye ngokulula uthathe ixabiso elilandelayo elilandelayo
Ukuba ufuna ukusebenzisa amandla, khetha uninzi lwakho
Ngenisa ilahleko yokumisa kunye / okanye nexabiso lokuthatha inzuzo
Qinisekisa i-oda yokuthenga / yokuthengisa
Njengoko ubona koku kungasentla, utyalomali lweCFD kwingxowa-mali yesalathiso lubonelela ngakumbi ngokuguquguquka kune-ETF.
Uzifumana njani iZiza eziBalaseleyo zokuRhweba
Ngaba ujonge ukwenza uphando kwezona ndawo zilungileyo zokurhweba ngaphambi kokuvula iakhawunti? Ukuba kunjalo, kukho uluhlu lweemetrikhi eziphambili ekufuneka ujonge kuzo - esizichazile apha ngezantsi.
Kuya kufuneka uqinisekise ukuba indawo yakho oyikhethileyo yokuthengisa ilawulwa. Ukuba akunjalo, kunqande. Onke amaqonga esiwacebisayo kweli phepha abambe ubuncinci ilayisensi yokulawula-ngamanye amaxesha ngaphezulu. Oku kubandakanya ukuthanda izinto ze FCA (UK), iCySEC (iSipro), kunye ASIC (Ostreliya).
Nje ukuba umisele ukuma komlawuli, kufuneka ujonge ukuba yeyiphi na impahla oza kuba nakho ukufikelela kuyo. Ngokukodwa, ngelixa phantse wonke umrhwebi kwindawo ye-Intanethi eya kudwelisa isalathiso semali, kuya kufuneka ujonge ukuba ezi zii-CFDs okanye ii-ETFs. Kwimeko ye-eToro, iqonga likunika ukhetho kuzo zombini.
Kuya kufuneka uqinisekise ukuba indawo oyikhethileyo yokuthengisa isiza siyayixhasa indlela oyithandayo yokuhlawula. Eyona ndlela yokufumana imali kwiakhawunti yomrhwebi idlula kwi-debit / ngetyala okanye kwi-e-wallet, njengoko imali ibalwa ngephanyazo. Ngenye indlela, ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa iakhawunti yebhanki, kuya kufuneka ulinde iintsuku ezimbalwa ukuze icace le mali.
Yonke imisebenzi yokurhweba iza ngendleko, ke kubalulekile ukuba uqonde ubume bemirhumo eqeshwe kwindawo oyikhethileyo yokurhweba. Nika ingqalelo ikakhulu ekusasazeni, kwiikhomishini zorhwebo, kwaye ukuba kufanelekile - umlinganiso weendleko.
Nangona unokuba nesalathiso esithile engqondweni, kungafika ixesha apho ufuna ukwenza khona uphando kutyalo-mali olutsha. Kananjalo, kungcono ukuba unamathele kwiziza zokurhweba zesalathiso ezinikezela ngesebe langaphakathi lophando. Oku kufuneka kuquke zombini ezobuchwephesha kunye nezinto ezisisiseko.
Akukho nto imbi njengokujoyina indawo entsha yokuthengisa, kuphela ukufumanisa ukuba inkxaso yabathengi ingaphantsi komhlathana. Kananjalo, jonga ukuba yeyiphi iiyure ezisebenza kwiqela labathengi, kunye neendidi zenkxaso enikelwayo. Amaqonga amaqonga ezorhwebo aphezulu anika inkxaso ngokuncokola bukhoma iiyure ezingama-24 ngosuku.
Iiplatifomu zorhwebo ezigqibelele zango-2021
Awunalo ixesha lokuphanda iqonga ngokwakho? Apha ngezantsi uyakufumana iindawo zethu ezintlanu eziphezulu zokurhweba ngo-2021. Zonke ii-brokers zethu eziphambi kokuhlolwa zilawulwa, zinikezela ngeemfumba zeendlela zokuhlawula, kwaye ziya kugxila kwi-index CFDs, ii-ETFs, okanye indibaniselwano yezi zimbini.
Ukuqukumbela, imali yesalathiso yindlela elungileyo yokutyala imali kwiimarike ezibanzi zesitokhwe. Nokuba ufuna ukufumana ukubonwa kwizitokhwe e-US, UK, Japan, okanye kwenye indawo-ungatyala imali kumakhulu eenkampani ngorhwebo olunye. Oku kuyenza ibe yeyona ndlela ilungileyo yokwenza ipotifoliyo eyahlukeneyo yezabelo.
Into esiyithandayo malunga nesalathiso semali kukuba ukhethe ubume besiseko. Kulabo bajonge ukonwabela iintlawulo zesahlulo esiqhelekileyo, ii-ETFs ziya kwanela. Ngaphandle koko, ukuba ufuna ukurhweba ngemali yenkcazo ngexesha elifutshane, uya kulungeleka kakhulu kwiCFDs.
Nokuba yeyiphi na indlela, siyathemba ukuba isikhokelo sethu sincede ukucacisa inkungu malunga nendlela esebenza ngayo urhwebo lwesalathiso. Ukuba uyafuna ukuqala ngeakhawunti yokurhweba kwangoko, singacebisa ukuba ujonge ubungakanani besinye seendawo zethu zokurhweba ezisisalathiso.
Ngaba ndizakufumana izabelo xa ndityala imali kwisalathiso?
Ewe, kodwa kuphela xa utyalomali kwi-index ye-ETF. Ukuba unayo, uyakuba nelungelo kwisabelo sakho sentlawulo yokwahlula-hlulwa ngokulingana nemali otyalomali.
Yintoni i-index fund CFD?
Ukuba utyalomali kwingxowa-mali yesalathiso nge-CFD, ke awuyiyo eyakho iasethi ephantsi. Endaweni yoko, i-CFD ijongene nokulandela umkhondo wexabiso lentengiso yokwenyani ye-ETF yesalathiso. Ngelixa oku kukuvumela ukuba ufake isicelo kunye nokuthengisa okufutshane kwisalathiso osikhethileyo, awuyi kuba nelungelo kwizabelo.
Kutheni ixabiso lesalathiso lixabiswa ngamanqaku?
Ingxowa-mali nganye yesalathiso- njenge-FTSE 100, iya kuba neninzi yabanikezeli abakunika ukufikelela kwisalathiso. Kungenxa yoko le nto ujonga ixabiso lotyalo-mali lwakho ngokwexabiso lesitokhwe somboneleli. Nangona kunjalo, njengoko kufuneka kubekho indlela efanayo yokulandela umkhondo wokuhamba kwesalathiso, oku kufuneka kuchazwe kumanqaku.
Utyala njani imali kwingxowa-mali yesalathiso?
Ukuba ujonge ukutyala imali kwisalathiso sendabuko se-ETF, umboneleli uya kuba ne-ETF edweliswe kutshintshiselwano lwesitokhwe. Kananjalo, kuya kufuneka uthenge izabelo ngomthengisi we-ETF. f uthengisa isalathiso se-CFDs, kufuneka ubeke ukuthenga okanye ukuthengisa i-odolo kumthengisi okwi-Intanethi.
Ndingathengisa kangakanani na xa ndirhweba ngemali yenkcazo?
Ukuba uwela ngaphakathi kuxolelwaniso lwe-ESMA-oya kuyenza ukuba use-UK okanye kwi-European Union, uya kuthi emva koko ufumane i-20: 1 kwizalathiso eziphambili ezinje nge-S & P 500. Ukuba awukhawulelwanga Ilizwe ohlala kulo, unokukwazi ukufumana amandla angaphezulu.
Zeziphi iindlela zokuhlawula endinokuzisebenzisa xa ndirhweba ngesalathiso?
Kuya kufuneka ukhethe kukhutshelo lwebhanki, ikhadi lebhanki letyala / lekhredithi, okanye i-e-wallet.
Zeziphi iifizi ekufuneka ndizibhatale xa kuthengiswa isalathiso?
Ukutyala imali kwi-ETF yesalathiso, kuya kufuneka uhlawule umyinge weendleko zonyaka. Ukuba ukhetha ii-CFDs, uya kuhlawuliswa ikhomishini yorhwebo.